Bụ ndị a na ụgbọ elu controllers dakọtara?
Bụ ndị a na ụgbọ elu controllers dakọtara? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #504
Nnọọ! N'ihi ya, ekpebiri m ịzụta ihe ọṅụ, eriri ụkwụ na ọkpụkpụ. Biko gwa m na ndị ọkachamara a dakọtara? Ma ọ bụrụ na ọ bụghị mgbe ahụ kọọ nsogbu ahụ ma nwee ike ịkwado ihe yiri nke ahụ? N'ezie, ị nwere ike ịkwado ihe ndị ọzọ na-achịkwa ọbụna ma ọ bụrụ na ndị a dakọtara kamakwa maka ozi gị, m ga-achọ ịnweta setịpụrụ a n'okpuru 300 € ọ ghaghị ịgụnye atọ: JOYSTICK, RUDDER PEDALS and THROTTLE LEVER.
Ndị a bụ ndị nchịkwa:
- Ihe na-atọ ụtọ T16000M
Bụ ndị a na ụgbọ elu controllers dakọtara? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #505
Ekwenyesiri m ike na ha dakọtara, ọ bụ ezie na ịchọrọ n'ezie nhazi dị mma, nweta Saitek X55. Ihe ahụ bụ nanị EPIC. Ọ dị mma, ọ naghị esi na ọnụahịa m (dịka ihe ọ bụla dị na ọnụahịa m ugbu a, ọ dị mwute ikwu na -
Are these flight controllers compatible? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #506
Ọ dị mma. Ma, echere m na ha dakọtara n'ihi na m na-aga ịzụta ọṅụ dị na Logitech 3D Pro na mgbe ahụ ha niile bụ Logitech bụ nke dị mfe karịa mgbe ahụ, ha ga-esikarị kwekọọ.
Bụ ndị a na ụgbọ elu controllers dakọtara? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #507
M na - eji Saitek x45, ma ọ bụrụ na m nwere ego ... M ga - enweta X55 na obi. Ọ ga-abụrịrị na ị ga-eji keyboard rụọ ọrụ n'oge ụgbọ elu ma ọ bụghị ma eleghị anya na-agwa ATC okwu.
Mkpịsị aka, ọkpụkpụ na nkwọ (nke dị n'azụ ikpere) na naanị ị ga - eji 1 USB ọdụ ụgbọ mmiri
Bụ ndị a na ụgbọ elu controllers dakọtara? 3 afọ 3 ọnwa gara aga #510
Ntọala dị mma ma enwere m mmasị na pedals na-achịkwa pedals otú ahụ ka m na-aga ndị a:
-Ndị Ụdị Nlekọta 3D Pro dị elu na-agba ọsọ
Daalụ maka enyemaka ahụ!
Oge ike page: 0.225 sekọnd